Soomaaliya oo maanta lagu wado in ay yeelato madaxweyne cusub
Updated About:256 days ago 0
Baarlamaanka Somalia ayaa lagu wadaa inuu maanta doorto madaxweyne cusub taasi oo ah talaabada koowaad ee uu dalka lugaha kala bixi doono tobanaan sano oo dagaala ah.
Mudanayaasha dhawaan la doortay ayaa saakay isugu tagaya Akadeemiyada Booliska ee Magaalada Muqdisho halkaas oo ay ka dhici doonto doorashada oo noqon doonta mid qarsoodi ah.
Musharaxiinta oo dhamaantood isugu dhawaa balanqaadyadi iyo qudbadihi ay jeediyeen ayaa ka kooban 24 musharax kadib marki uu shalay tana sulay C/raxmaan C/shakuur Warsame, musharaxiintaasina waxaa ka mid ah madaxweynihi hore Sharif Sheikh Ahmed iyo Ra’isulwasaare Abdiweli Mohamed Ali.
Marki ugu horeysay mudo 42 sana ah, maanta waxaa ka dhaceyso Muqdisho doorashada madaxweynaha oo laakin aysan dadku soo dooraneyn, waxaana arintani lagu tilmaamayaa mid muujineysa in horumar laga sameeyey amaanka.
Si uu u guuleysto wareega koowaad musharax kasta waxaa laga doonayaa inuu helo laba dalooloow sadex dalool oo micnaheedu yahay sadex marka loo qeybiyo codadka laba qeyb, wareega labaad waxaa loo baahnaanayaa isla tiradaaasi, laakin wareega sadexaad ayaa hadii ay laba isugu soo harto lagu kala bixi doonaa cod dheeri.
Madaxweynaha haatan xilka kasii dagayo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed, dalkana soo maamulayey tan iyo sanadki 2009 ayaa loo tixigenlianaa inuu yahay musharaxa ugu cad cad.
Xildhibaanada ayaa haatan kusii qul qulaya garoonka diyaaradaha Adan Cade halkaas oo loogaga qaadi doono basas loo diyaariyey in ay geeyaan Akadeemiyada Janaraal Kaahiye ee degmada Xamar Jajab.
Wixi warar ah kala soco Midnimo.com
Xuska sanadguuradii 50-aad ee AU oo maanta Muqdisho lagu qabtay
Sawiro:Banaan-bax maanta Muqdisho ka dhacay
Dagaal shalay ka dhacay Waqooyi Galbeed B/weyne
Somalia Prime Minister welcomes progress in parliament and outlines road ahead on Jubaland and Somaliland